သံသရာ လမ်းညွှန် အဘိဓမ္မာ သင်တန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » သံသရာ လမ်းညွှန် အဘိဓမ္မာ သင်တန်း
Posted by ဆူး on Aug 4, 2011 in Education | 17 comments
ဆူး စိတ်ကူး သံသရာ လမ်းညွှန် အဘိဓမ္မာသင်တန်း
သံသရာ လမ်းညွှန် အဘိဓမ္မာသင်တန်း
သင်တန်း နည်းပြ – ဆရာမ ဒေါ်ငွေရည်ဦး
သင်တန်း နေ့ရက်- ၁၄ – ၈ – ၂၀၁၁ (တနင်္ဂနွေနေ့၊ ၀ါခေါင်လပြည့်နေ့)
သင်တန်း အချိန်- နံနက် ၉နာရီ မှ ညနေ ၄နာရီ
သင်တန်း နေရာ- ပန်းလှိုင်အာရုဏ်တော် ၀တ်အသင်း ဓမ္မာရုံ ဟုမ်းလမ်း ရပ်ကွက်။
မေတ္တာအခါတော်နေ့ အဖြစ် မေတ္တာသုတ်တော်ကို ကျင့်စဉ်နှင့် တကွ ပို့ချ သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
မည်သူမဆို တက်ရောက် သင်ကြားနိုင်ပါသည်။
`လူ့လောကမှာ မေတ္တာလောက် ကောင်းသော အရာ ဘာမှ မရှိဘူး။ မေတ္တာလောက် ကောင်းတဲ့ အဆောင်ကောင်းလဲ မရှိဘူး´
အကြင်သူသည် အမြဲ သတိပြုလျက် အတိုင်းအရှည် ပမာဏ မရှိသော မေတ္တာဈန်ကို ပွားများ၏။
ခန္ဓာဟူသော ဥပဓိကုန်ရာ နိဗ္ဗာန်ကို မြင်သော ထိုသူအား သံယောဇဉ် တို့သည် ခေါင်းပါးကုန်၏။
ဗျာပါဒကြောင့် ပျက်စီးသော စိတ်မရှိသော သူသည် တစ်ဦး တစ်ယောက်သော သတ္တ၀ါကိုသော်လည်းကောင်း အကယ်၍ ကောင်းမှုကုသိုလ် ရှိသူ ဖြစ်၏။ သတ္တ၀ါ အားလုံးတို့ကို စိတ်ဖြင့် စောင့်ရှောက်သော စင်ကြယ်သော စိတ်ရှိသူသည် များစွာ ကောင်းမှု အစုကို ပြီးစေ၏။
သတ္တ၀ါ အားလုံးတို့၌ မေတ္တာနှင့် ယှဉ်သော စိတ် အဖို့အစု ရှိသော အကြင်သူသည် (တစ်စုံတစ်ယောက်ကို) ကိုယ်တိုင်လည်း မညှင်းဆဲ မသတ်ပုတ် အနိုင်အထက်ပြု၍လည်း အနိုင်မယူ သူတပါးကိုလည်း မဆုံးရှုံးစေ ထိုသူအား တစ်စုံတစ်ရာသော အကြောင်းကြောင့် ဘေးရန် မဖြစ်နိုင်။
(ဣတိဝုတ်၊ မေတ္တာဘာဝနာ သုတ်)
နေ့လည်စာ ထမင်းနှင့် အအေးများ ဒါန ပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ပါဝင်စားသူများ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
အဲဒါကြီးကို ရုပ်(ခန္ဓာကလွန်ပြီး) ဘယ်လို.. တစုံတယောက်..တခုခုဆီ..ပို့လွှတ်လိုက်သလည်း .. ဟိုဖက်က(သတ္တ၀ါဆိုပါစို့)ဘယ်လိုလက်ခံရယူသလည်း… ဆိုတာ… အဘိဓမ္မာအရ… ရှင်းပြပေးဖို့.. မေးပေးစေလိုပါတယ်..။
မရဏဇောကျ..ဒီဘ၀ကသေတဲ့အခါ.. ဟိုဖက်ဘ၀ခြားက..ပဋိသန္ဓေဖက်ကို.. ဘယ်လိုလုပ်ပြီး.. ဘ၀ဘ၀က..မရေမတွက်နိုင်တဲ့.. ကံတွေသယ်သွားသလည်း.. အဘိဓမ္မာအရဖွင့်ပြစေချင်လို့ပါ..။
ဒီမှာဖက် ခန္ဓာနှင့်ဒွန်တွဲသော မေတ္တာစိတ်က
ဟိုမှာဖက်ခန္ဓာနဲ့ဒွန်တွဲသော နာမ်စိတ်ကို သွားကိန်းတယ်လို့
ဘယ်နေရာမှာ ရှိလို့လည်း ကျမ်းကိုးလေးများ မရှိပေဘူးလား
( မိမိစိတ်၏ ချမ်းသာခြင်းကို အဖ အမေ ဆွေမျိုး ညာတိတို့သည် မပေးစွမ်းနိုင်
မိမိ၏ ကောင်းစွာ ဆောက်တည်အပ်သော စိတ်သည်သည်သာ မိမိစိတ်၏ ပြည့်စုံခြင်းကို ပေးနိုင်၏ )
ဖြန့်ဝေပေးလို့ ကျေးဇူးပါ ဆူးရေ။ တက်လည်း တက်ချင်တယ်။ တက်နိုင်အောင်လည်း ကြိုးစားပါ့မယ်။
တက်ချင်တယ် တက်ဖြစ်မယ်လိုထင်ပါတယ် မိုးပွင့်ကပန်းလှိုင်မှာနေတာလေ
တက်တော့တက်ချင်ပါတယ် … ဒါပေမယ့် သင်တန်းချိန်က တစ်နေကုန်ဆိုတော့ နဲနဲစဉ်းစားရအုန်းမယ် …
ဆူး ရေ…သင်တန်းက ၁၄ – ၈ – ၂၀၁၁ (တနင်္ဂနွေနေ့၊ ၀ါခေါင်လပြည့်နေ့) တစ်ရက်ထဲ သင်မှာလား
အမ ရေ တရက်တည်း သင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်နဲ့ မအားလပ်တဲ့ ကြားထဲက သိချင်သူများ သွားတက်နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလှူရှင်များက လာတတ်တဲ့ လူတွေ အပန်းမကြီးအောင် အစားအသောက်က အစ စီစဉ်ပေးထားမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ တက်ချင်ရင်တော့ တနင်္လာ အင်္ဂါနေ့ ညနေ ၆နာရီတိုင်းအဲဒီ ဓမ္မာရုံမှာ သင်ပေးနေပါတယ်။
“လူ့လောကမှာ မေတ္တာလောက် ကောင်းသော အရာ ဘာမှ မရှိဘူး။ မေတ္တာလောက် ကောင်းတဲ့ အဆောင်ကောင်းလဲ မရှိဘူး´” လူဦးရေကန့် သတ်ချက်မရှိပါဘူးနော်???
ရွာထဲက တပ်ချုပ်ကြီး မေးတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေကြားပါတော့မယ်။
ဂိုဏ်းချုပ်ကြီး ဟိုးအရင်တုန်းက ရုပ်မြင်သံကြားမှာ သံထည် နဲ့ စတီး ပစ္စည်း ဇွန်းတွေ ထင်တယ် အဲဒါတွေကို လက်အကူအညီ မပါပဲ ကွေးပြတဲ့ အစီအစဉ် ရှိဖူးတယ်။ အဲဒီ အစီအစဉ် မှာ စိတ်စွမ်းအားနဲ့ ကွေးပြတဲ့ လူက ကွေးနေတုန်း အချိန် ရုပ်မြင်သံကြားရှေ့မှာ ဇွန်းကိုင်ထားရင် အဲဒီ ဇွန်းပါ ကွေးတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။
ထိုလူသည် သာမန်လူထက် ထူးသော လူတဦးလို့ မှတ်တမ်းဝင်သွားပါသည်။
ဘာထူးသလဲ တဖက်က ပြန်တွေးတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းအားတွေ ရှိတယ်လို့ ပြောရမလားပဲ။
သူတော်ကောင်းများ မေတ္တာပို့တဲ့ အခါ သတ္တ၀ါတွေ လက်ခံရရှိမှုသည်လည်း ထိုကဲ့သို့သော စိတ်စွမ်းအားများကို အခြေခံပါသည်။
ရုပ်မြင်သံကြား ဌာနတွေမှာ ထူးခြားစွမ်းအင် ပိုင်ရှင်များဆိုပြီး အစီအစဉ်တွေ လာတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ဓါးတချောင်းကို ကိုင်ပြီးတော့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ မယုံနိုင်စရာ ကောင်းလောက်အောင် ကြီးမားတဲ့ အရာ မာကျောတဲ့ အရာ စတာတွေကို ဖြတ်ပြတယ်။ ကြည့်ဖူးမှာပါ။ ဓါးက ထက်လို့ မဟုတ်ဘူး စိတ်နဲ့ ဓါးနဲ့ တထပ်တည်းကျတာမျိုး စတာတွေ ကြောင့်ပါ။ စိတ်နဲ့ လုပ်တာနဲ့ တထပ်တည်း မကျလျှင်.. ဥပမာ လက်ကတော့ ဓါးကိုင်ပြီး လှီးနေပါရဲ့ စိတ်က အတွေးတခြားစီ ဖြစ်နေခဲ့လျှင် လက်ဓါးထိတတ်တယ်။
ထိုကဲ့သို့ပင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းအင်မြင်မားသူတို့ ပို့သတဲ့ မေတ္တာကို သတ္တာဝါတို့ ရရှိခံစားရမှုသည်လည်း မြင့်မားတဲ့ စိတ်စွမ်းအားကြောင့်သာ ဖြစ်ပါသည်။ မယုံလျှင်တော့ ကိုယ်တိုင် ကျင့်ကြည့်ပါ။
စန္ဒရားတီးတတ်တိုင်း ပညာရှင် အကျော်အမော် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စူးစိုက်မှုနဲ့ ပါရမီ ရင့်သန်မှုကြောင့်သာ ထူးခြားတဲ့ သံဇဉ်များကို ဖော်ထုတ်ပြီး လူအများ နှစ်ခြိုက်သဘောကျခြင်း ခံရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထိုကဲသို့ပင် သူလည်း လုပ်သည် ငါလည်း လုပ်သည် သူကျတော့ ဖြစ်သည် ငါကျတော့ မဖြစ်ဘူး ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေ လူတွေမှာ ဖြစ်တတ်သည်။ တချို့အရာများသည် မွေးရာပါ ပင်ကို ဗီဇ ဆိုတဲ့ အရာကို လူတွေ လက်ခံယုံကြည်တတ်ကြသည်။ တချို့ကလေးများ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတယ်.. သူမှာ ပါရမီ ပါလာလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ထိုသို့ လူတွေ သုံးသပ်ကြသည်။
အခုတွေးရေးရှင်းတာက… ဒီခေတ်ရဲ့ သင်္ချာတတ်။ စာတတ်။ ကမ္ဘာ့လုံးတာသိတဲ့.. ဆူးမမအတွေ့အကြုံ.ဗဟုသုတနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်..။
သိချင်တာက.. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၂၃၀၀လောက်က.. သင်္ချာမတတ်..။ သဒ္ဒါမတတ်.. စာမတတ်သူတွေရဲ့.. အဘိဓမ္မာနဲ့ရေးရှင်းပေးရမဲ့… အဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်နော…။
မရဏ ဇော ကျတဲ့ အခါ နောက်ဘ၀ သို့ ကူးပြောင်းခြင်း စတဲ့ မေးခွန်း အတွက် ဆိုလျှင်..
အိပ်ပျော်ခြင်းသည် ၅၀% သေခြင်းလို့ လူတွေ ပြောတာကြားဖူးတယ်။
သေတဲ့ အကြောင်းကို သေတဲ့ အခါမှ သိတာ မိုလို့ အနီးစပ်ဆုံး အိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့ ရိုးရှင်းစွာ တွေးကြည့်မယ်။
အိပ်ပျော်တဲ့ အခါ အိပ်မက် မက်ဖူးလား။
အိပ်မက် မက်တဲ့ အခါ အမျိုးစုံအောင် မက်တတ်တယ်။
တခါတရံ နေ့လည် နေ့ခင်းက ကြုံကြိုက်ခဲ့တဲ့ အရာတွေ မက်သလို ရှိတတ်ပြီး
တခါတရံ နှစ်ပေါင်းများစွာက ကွဲကွာနေတဲ့ လူတွေ မေ့လျော့နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ကို မက်တတ်တယ်။
တခါတရံ လုံဝ မရောက်ဘူးတဲ့ နေရာ တခါတရံကျတော့လည်း အရင် တချိန်က ကျင်လည် ခဲ့ဖူးတဲ့ နေရာကို ထပ်ခါ ထပ်ခါ မက်တတ်တယ်။
တခါတရံ သိပ်တွေးလွန်းတဲ့ အရာ စိတ်သိပ်ပူလွန်းတဲ့ အရာတွေ အိပ်မက်ထဲမှာ တကယ်လိုလို ဘာလိုလို မြင်တာမျိုးတွေ ရှိတတ်တယ်။
အိပ်မက် မက်တဲ့ အခါ ကာယကံရှင်မှ တပါး တခြားသော လူတွေ ဘာမြင်တယ် ဘာမက်တယ် ဆိုတာ မသိသလို ပြန်ပြောရင်လည်း ကာယကံရှင် ပြောတာပဲ သိနိုင်ပါတယ်။
တနည်းအားဖြင့် စိတ်ပိုင်း ပြန်လှည့်မယ် ဆိုလျှင်.. အိပ်မက် ဆိုတာ စိတ်ထဲ စွဲတဲ့ အရာတွေ မက်တယ်လို့ ပြောကြပြန်တယ်။
တခါတရံ မတွေးမိဘူး အဲဒီ ကိစ္စ ဟိုး အရင်တုန်းက ဖြစ်တာ ဘာလို့ အိပ်မက် မက်သလဲ မသိဘူးလို့ လူတွေ ပြောတတ်ကြတယ်။ ကိုယ်တိုင် ပင်ကိုယ် စိတ် နဲ့ လှုပ်ရှားသွားလာနေပြီး လုံးဝ မတွေးမိပေမဲ့ အတွင်းစိတ်ကတော့ ဒီကိစ္စကို သေသေချာချာ မှတ်မိနေတတ်တယ်။ ထိုကဲ့သို့ပါပဲ.. မသေခင်မှာ ပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ် အကုသိုလ်တွေက လှုပ်ရှား သွားလာတဲ့ အခါမှာ မတွေးမိပေမဲ့ အိပ်ပျော်သွားတဲ့ အခါ အိပ်မက် အဖြစ် မြင်မက်သလိုမျိုး.. သေခါနီး မရဏ ဇော ကျတဲ့ အချိန်ပိုင်းကလေး အတွင်းမှာ ပြန်မြင်တတ်တယ်။ အဲလို မြင်တာမျိုးကို မတွေးဘူး ဆိုပြီး ဖန်တီးယူလို့ မရဘူး ဖန်တီးယူချင်တယ်ဆိုလျှင်တော့ ကျင့်ယူရမှ ရမယ်။ ထူးခြား စွမ်းအင် ပိုင်ရှင်များ အစီအစဉ်တွေမှာ ပြသလို လက်ကလေးနဲ့ ပုတ်လိုက်တာ သံပိုက်လုံးကြီး ပြတ်သွားတာမျိုး.. စတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်မှုတွေ ရှိထားမယ် ဆိုရင်တော့ မရဏ ဇော နမိတ်တွေ ကိုယ်လို သလို ပုံဖော်နိုင်မယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဘ၀ အဆက်ဆက် သံသရာမှာ ကျင်လည်နေတဲ့ အခိုက်မှာ ကံကို ယူဆောင်သည် ဆိုသည်မှာလည်း စောစောက အိပ်မက် ဥပမာ လိုပါပဲ.. ယခု ဘ၀မှာ ပြုဖူးကုသိုလ် အကုသိုလ် ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်.. လုံးဝ မတွေးထား မသိထားတဲ့ အရာတွေ မက်မြင်တယ် ဆိုသလိုပဲ.. အတိတ်က ဘ၀ တခုမှာ ပြုထားတဲ့ ကုသိုလ် အကုသိုလ်တွေ အကျိုးပေးတာမျိုးလည်း ရှိတတ်တယ်။
လုပ်ရပ်နဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားပါတယ်… သာဓုခေါ်ပါတယ်..
ကြည့်လည်း လုပ်ကြပါဦး အရပ်ကတို့ရယ်…
ဦးဇင်းတွေ ကိုရင် တွေ ခမျာ.. ဒူးပွန်း တံတောင်ပွန်း သင်ရရှာတဲ့.. အဘိဓမ္မာတွေကို… သူတို့က..
တဂျီး မေးထား တာလေး မေးပေးလိုက်ပါဦး…ဂျာ..
အဘိဓမ္မာနည်း အရပဲ နော်.. အဲဂလို ဖြေနိုင်မှ အဆင်ပြေမယ်.
နို့မို့ အဘိဓမ္မာ ကို လူတတ်တွေက ဝေဖန်ကုန်မယ်..
I agree with you in certain extent,
It cannot be possible to learn အဘိဓမ္မာ in one day.
Even our lord Buddha need to take3months to teach “Nat” (intelligent spirit).
Moreover, it’s absolutely necessary now,
as most of “htae Ra War Da” Buddhist do not properly understand their religion.
May be they will explain only
500 Bats, Shin Tharri Putra, Chapters & general ideas.
Anyhow, we will at least get “Ku Tho” like 500 Bats.
I think that discussion-class is just introducing about A Bi Dhamar and to give awareness of learning it.
ပထမမေးခွန်းကို ဘဒ္ဒ န္တ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု မှ
လူပြိန်းများ နားလည်အောင် ဖြေကြားရမည်ရှိသော်
ရူပဗေဒနည်းအရ ရေသည် မြင့်ရာမှ နိမ့်ရာသို့ စီးဆင်းခြင်းသဘောရှိလေ၏
လေသည် ဖိအားများရာမှ ဖိအားနည်းရာသို့ တိုက်ခတ်ခြင်းသဘောရှိ၏
အပူအအေးသည် အားသာရာသို့ ကြီးစိုး၏
( မီးများမီးနိုင် ရေများရေနိုင် အလွယ်မှတ်လေ )
တည်ငြိမ်ရုပ်နှင့် ရွှေ့လျှားရုပ်တို့ တိုက်မိသည်ရှိသော် ရွှေ့လျှားရုပ်၏ အပြစ်ဖြစ်၏
တဏှာ၊ မာန ၊ ဒိဌိ ဟူသော အကြောင်း၏ မသိမှု့အဝိဇ္ဇာတွင်
လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ကြောင့် ဖြစ်သော စိတ်၏ ပူလောင်ခြင်းသည်တစ်ဖက်
စေတနာ၊ မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပက္ခာ နှင့် ယှဉ်၍ဖြစ်သော စိတ်၏ ငြိမ်းချမ်းခြင်းသည်တစ်ဖက်
ထိုနှစ်ခု ယဉ်တွဲသော် အားနည်းသူသည်ရှုံးလတ္တံ္က့သဘောဖြစ်၏။
ထိုတွင် အပူအအေးတို့သည် အားကြီးသူမှ လွှမ်းမိုးခြင်းသဘောကို နားလည်ကြစေကုန်သတည်း။
( ဒါကတော့ ကျုပ်လည်း ဒီလောက်ဘဲနားလည်တယ်ဗျ
ခင်ဗျားတို့လည်း နားလည်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်
ဒုတိယမေးခွန်းကတော့ နောင်များကြုံမှ ဖြေကြားတော်မူပေးမယ်
အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေသေးလို့ သီးခံတော်မူကြကုန်စေသတည်း )
ဂျော်နီအောင်ပုနဲ့ ဂျော်လကီအောင်ဘု ဘယ်ဟာကို ပိုအားကြီးသတုံးဗျ၊ နှစ်ဖက်ချွန်တော့ မလုပ်နဲ့နော်…။